Voatsikera tao amin’ny media sosialy noho ny fomba fiakanjony ilay Breziliana vehivavy mpanao lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, čeština , Swahili, English
Sarin'ny solombavambahoaka Ana Paula, tamin'ny andro voalohan'ny niasany. Loharanon-tsary: pejy Facebook manokana, azo ampiasaina .
Nanao akanjo mena midorehitra sy firavaka i Ana Paula da Silva, ilay solombavambahoaka Breziliana vaovao voafidy nandritra ny fanokafana ny fotoam-piasan'ny parlemantera tamin'ny 31 Janoary. Namoaka ny sarin'ity fotoana ity tao amin'ny Facebook izy ary nifoha niaraka tamin'ireo andiana fanehoan-kevitra feno fankahalana izy ny ampitson'iny. Ny antony: ny akanjony mampiseho tratra.
Iray amin'ireo vehivavy dimy amin'ny mpanao lalàna miisa 40 voafidy tao amin'ny antenimieram-pirenena tao Santa Catarina, fanjakana Breziliana any atsimo i Ana Paula da Silva.
Nahazo fanehoan-kevitra miisa 6.400 ny sariny ary zara miisa 6.447, anisan'izany ny fanaratsiana maro sy ny fandrahonana.
Saingy tsy vao voalohany tany Brezila no semban-drahona noho ny safidin'ny vehivavy amin'ny fomba fiakanjony ny fahaiza-manaony ao amin'ny toeram-piasany
Torohevitry ny lehilahy amin'ny fomba fitafin'ny vehivavy
Tamin'ny taona 2009, niakatra an-tsehatra tao amin'ny lapan'ny antenimiera ny mpanolotsaina monisipaly ao Porto Alegre, Fernanda Melchionna niaraka tamin'ny fehitenda mainty sy fotsy mba hanoherana ny volavolan-dalàna izay mametraka ny fehezan-dalàna mifehy ny fomba fitafin'ny mpanao lalàna vehivavy.
Matetika mandeha miasa miaraka amin'ny pataloha jeans sy tennis, izay heverin'ny lehilahy mpiara-miasa fa tsy mety i Melchionna, izay solombavambahoakam-panjakana ankehitriny.
Nilaza izy fa natao ho an'”ny kamo sy ho an ‘ireo izay tsy mampiasa ny fe-potoana iasany amin'ny olana ara-tsosialy” ny adihevitra fitoeran'akanjon'ny vehivavy.
Tsy amin'ny politika fotsiny no hiainan'ny vehivavy ny zavatra toy izany. Tamin'ny taona 2017, nivoady ny hitory ny mpitsara iray ilay misolovava Pamela Helena de Oliveira Amaral rehefa nampiato ny fitsarana ilay mpitsara mba hanehoany ny tsy fankatoavany ny fomba fitafiny. Nanao akanjo miloko manga lava mampiseho soroka i Pamela. Nandao ilay efitrano ilay mpitsara Eugênio Cesário ary tsy niverina raha tsy nindrana lobaka tamina vehivavy mpiara-miasa aminy i Pamela .
Hoy i Pamela nandritra ny antsafa tamin'io fotoana io:
Gaga aho, nisavoritaka. Mbola tsy azoko tsara izany rehetra izany. Nahamenatra, nanahirana sy nampisavoritaka ny zavatra nataony tamiko teo anoloan'ny mpiara-miasa amiko. Feno mpianatra sy mpisolovava hafa ny efitrano.
Nanadihady ny fomba fijerin'ny olona momba ny safidin'ny vehivavy amin'ny fomba fiakanjony eo amin'ny tontolo politika ilay bilaogera Nawsheen Rumjaun tao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Ny Tanjaky ny Tovovavy sy ny Herin'ny Fitafy: ny vehivavy manao Politika”:
[…] mitombo ny isan'ireo vehivavy matanjaka, saingy mbola sarotra ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny politika. Fitaovam-piadiana hametrahana ny fahefany eto amin'ity tontolon-dehilahy ity ny akanjo izay nofidian-dry zareo. Amin'ny politika, tsy misy fitsipi-pandaminana momba ny fomba fiakanjo fa fitsipika tsy voalaza mivantana no misy toy ny tokony hanaovan'ny lehilahy palitao, sy ny tokony hanaovan'ny vehivavy fitafy mendrika. Mety homen-tsiny noho ny fitafiany ireo izay miampita ny tsipika eo anelanelan'ny mendrika sy ny tsy mendrika.
Ny halavan'ny akanjo mampiseho tratra
Nahazo vato miisa 51.739 i Ana Paula, ka nahatonga azy ho fahadimy tamin'ny mpanao lalàna nahazo vato be indrindra tao amin'ny fanjakany.
Naneho hevitra momba ireo tsikera izy tao anatin'ny antsafa niaraka tamin'ny Universa, tranonkala iray ao an-toerana mitantara ny olan'ny vehivavy: “Kely loatra ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina hany ka ny akanjo mampiseho tratra avy no lasa miteraka olana goavana”, hoy izy.
Namoaka lahatsary tao amin'ny pejiny Facebook ihany koa izy ary namaly ny tsikera. Feno fanevatevana ihany koa anefa ny fanehoan-kevitra tamin'io lahatsary io . Nilaza ny mpisera iray antsoina hoe Vitor hoe:
Amin'ny fanajako anao tanteraka, moa hadinonao ve hoe tontolo toy ny inona no hiasanao ao anatin'ny andro vitsivitsy? Fombafomba, azafady. Mba asio fanajana! Ny fitsipi-pitondrantenan'ny Parlemantera.
Mpisera iray hafa, vehivavy iray antsoina hoe Yelena Sier izay nahazo valinteny miisa 252 tamin'ny fanehoan-keviny izay nanakianany ny mpanao politika:
Tsy takatry ny olona !! Tsy bikini no entina mankany amin'ny hôpitaly, tsy pyjama no entin'ny ankizy any am-pianarana, tsy amin'ny fitafiana anatiny ny lehilahy no mandeha mividy mofo, tsy misy olona manao fandidiana manao fitafiana izay tiany, tsy misy olona mandeha mankany amin'ny fety fankalazana ny tsingeritaona na ny fampakaram-bady amin'ny pijama, sns … mitaky akanjo mifanentana amin'izany ny fotoana rehetra , misy ny fanamiana sy ny sisa any amin'ny orinasa , ary mahafantatra izany ny rehetra . Tsy mikasika ny akanjo hanaovana na tsy hanaovan'ny vehivavy no olana eto fa samy manana ny akanjo mety aminy ny toerana tsirairay.
Tao amin'ny lahatsoratra iray hafa, niaro ny zon'i Ana Paula hiakanjo izay safinidiny i Rosimere Furtado :
Arahabaina namoaka ity olana ity! Raha manenjika mpampianatra ny solontenam-panjakana manao akanjo tena mihaja iray ary milaza fa tsy mila fampiasam-bola ny fanabeazana dia natombokao indray ity ny adihevitra momba ny maha-zava-dehibe ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny politika, momba ny famonoana vehivavy, noho ny antony izay tsy miankina amin'ny loko sy ny fomba fiakanjo. Miteraka adihevitra ny akanjo mampiseho tratra rehetra ao amin'ny ” tontolo ” izay tsy hita ny nalehan'ny saina ary avohitra tafahoatra ny fananahana, lasa mampiady izay rehetra fitafy misy dakaka.
Novalian'i Ana Paula ireo mpitsikera azy tamin'ny fampahatsiahivana azy ireo ny lalana efa nodiaviny: efa voafidy ho ben'ny tanàna indroa tao an-tanandehiben'i Bombinhas izy talohan'ny naha-voafidy azy tao amin'ny antenimieram-pirenena ary niala tamin'ny toerany niaraka tamin'ny fankatoavana 90 isanjato.
Nandefa antsafa tao amin'ny Facebook ihany koa i Ana Paula izay nilazany hoe: “Manao politika ny vehivavy ary tokony hizatra araka izany ny fiarahamonina. Misy lohahevitra maro hafa manan-danja kokoa ho resahana amin'ny fivorian'ny mpanao lalàna. “
Nanadihady ireo tsikera ihany koa izy ary nilaza fa hitory ny olona nanohintohina azy. Hoy izy tamin'ny mpanatontosa antsafa iray hafa :
Hanohy hanao izay tiako hanaovana foana aho. Tsy te hihafihafy aho mba hampifalifaliana ny hafa.